I-Aprepitant powder (170729-80-3) hplc≥98% | I-AASraw R&D Reagents
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / I-Aprepitant powder
Akukho kalo SKU: 170729-80-3. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwintlawulo enkulu ye-Aprepitant powder (170729-80-3), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Iprepitant powder isetyenziswe ngamanye amayeza kubantu abadala kunye nabantwana be-6 inyanga yobudala nangaphezulu ukukhusela isicupunu kunye nokuhlanza okungenzeka kwiiyure ze-24 emva kokufumana unyango lwekhemotherapy lomhlaza. Kwakhona kusetyenziswa namanye amayeza kubantu abadala kunye nabantwana be-6 inyanga yobudala nangaphezulu ukukhusela ukulibaziseka nokuhlanza okungenzeka iintsuku ezimbalwa emva kokufumana imithi ethile yeyeza-chemotherapy.
I-Aprepitant powder video
Iprepitant powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Iprepitant powder
Ifomula yeMolekyuli: C23H21F7N4O3
Ubunzima Ezinto: 534.4266624
Ukusetyenziswa kwepalpitant powder
I-aprepitant powder yileyilisi yesigqirha esetyenziswa ngabantu abadala ukukhusela isicupunu kunye nokuhlanza:
ukuthintela isantya kunye nokuhlanza okungenzeka kwiiyure ezingama-24 emva kokufumana unyango lwe-chemotherapy
ukuthintela ukubambezeleka kweentlanzi kunye nokuhlanza okungenzeka iintsuku eziliqela emva kokufumana imithi ye-chemotherapy
ukukhusela isantya kunye nokuhlanza okubangelwa utyando
I-aprepitant powder ayisetyenziselwa ukhathaza isicupunu kunye nokuhlanza osukhona.
I-aprepitant powder ayifanele isetyenziswe ngokuqhubekayo ixesha elide (usetyenziso olungapheliyo).
Ayaziwa ukuba i-Aprepitant powder ikhuselekile kwaye isebenza kubantwana.
Eli mayeza anokumiselwa kwezinye izinto. Buza ugqirha wakho okanye umsemistri ngolwazi olungakumbi.
Isilumkiso kwi-Aprepitant powder
I-aprepitant powder iza njenge-capsule kunye nokumiswa komlomo (i-liquid) ukuthatha ngomlomo. Ukuthintela isicupunu kunye nokuhlanza obangelwa ngumhlaza we-chemotherapy, i-Aprepitant powder idlalwa kanye rhoqo, kunye okanye ngaphandle kokutya, ngeentsuku zokuqala zomhlaza wakho wekhemotherapy. Mhlawumbi uza kuthatha i-Aprepitant i powder 1 ngeyure ngaphambi kwekhemotherapy yakho kwiintsuku ze1, 2, kunye ne-3 yonyango lwakho. Ukuba awufumani i-chemotherapy kwiintsuku ze-2 kunye ne-3, ngoko uya kuthatha i-Aprepitant powder ngaloo mihla kusasa. Ukuthintela isicupunu kunye nokuhlanza okubangelwa kukuhlinzwa, i-Aprepitant powder idlalwa njengowodwa umthamo kwiiyure ze-3 ngaphambi kokuqalisa ukuhlinzwa. Landela izikhokelo kwiileyibrari yakho ngokuchanekileyo, uze ucele ugqirha okanye umkhemisi wakho ukuba achaze nayiphi na into ongaziqondiyo. Thatha i-Aprepitant powder ngokulandelelana. Musa ukuthatha ngaphezulu okanye ngaphantsi okanye uthathe ixesha elide kunokuba umiselwe ugqirha wakho.
Iipreferensi ze-Aprepitant ze powder ziza kwamandla amabini ahlukeneyo. Ugqirha wakho unokuyalela zombini amandla ukuba uthathe ngamaxesha ahlukeneyo. Kufuneka uqaphele ukuba uthathe amandla athile ngexesha elifanelekileyo njengoko ugqirha ugqirha wakho.
Gcwalisa iifomsile ngokupheleleyo; musa ukwahlula, ukuhlafuna okanye ukuwachoboza.
Ukumiswa komlomo kuya kulungiswa ngumniki-nkonzo wakho wezempilo kwaye unikezwe kwi-dispenser yomlomo. Gcina umrhumo womlomo kwiqrijini kuze kube lixesha ledosi yakho; Nangona kunjalo, inokugcinwa kwindawo yeqondo lokushisa ukuya kwiiyure ze-3 ngaphambi kokusetyenziswa. Xa ulungele ukuyisebenzisa, susa i-cap kwi-dispenser ngaphambi kokuba uyibeke emlonyeni wakho ukukhulula ngokukhawuleza loo mayeza.
I-Aprepitant powder isebenza kuphela ukukhusela isisulu sokuncwina nokuhlanza. Biza ugqirha wakho ukuba sele unayo le mpawu kwaye ungaqali ukuthatha i-Aprepitant powder.
Xa zisetyenziselwa ukukhusela isantya kunye nokuhlanza okubangelwa ngumhlaza we-chemotherapy, i-Aprepitant powder isetyenziswa kuphela ngexesha lokuqala lwe-3 iintsuku zokunyanga kwe-chemotherapy. Ungaqhubeki ukuthatha i-Aprepitant powder ixesha elide kunokuyalelwa ngugqirha wakho.
A: Kubantu abathatha i-Aprepitant powder ukukhusela isicupunu kunye nokuhlanza okubangelwa yi-chemotherapy, iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo ziquka:
Kubantu abathatha i-Aprepitant powder ukukhusela isicupunu kunye nokuhlanza emva kokuhlinzwa, iziphumo eziqhelekileyo eziqhelekileyo zi:
uxinzelelo lwegazi oluphantsi
Olu alukho uluhlu olupheleleyo lweziphumo zecala leyeza. Buza ugqirha wakho okanye umsemistri ngolwazi olungakumbi.
Tshela ugqirha wakho ukuba unayo nayiphi na impembelelo yecala elikukhathazayo okanye loo nto ayihambi.
Shayela ugqirha wakho kwiingcebiso zonyango malunga nemiphumo emibi.
B: I-aprepitant powder ingabangela imiphumo emibi, kuquka:
Impendulo eyingozi kakhulu. Ukuphendula okwenziwe nge-allergen kungenzeka nge-Aprepitant powder kunye nokuba nobunzima. Yeka ukuthatha i-Aprepitant powder uze ubize ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba unayo nayiphi na le miqondiso okanye iimpawu zendlela yokuphendula:
ukuphefumula okanye ukugwinya.
Ubungqina obukhulu besikhumba lunokungafaneki.
Musa ukuthatha iprepitant powder ukuba:
ziyingozi kwizithako kwi-Aprepitant powder
bathatha nawaphi na mayeza alandelayo:
Ukuthatha i-Aprepitant powder kunye nawaphi na mayeza angabangela iingxaki ezinzulu okanye ezongela ubomi.
I-aprepitant powder yile mithi yonyango esetyenziselwa ukukhusela isicupunu kunye nokuhlanza okungenzeka kwiiyure ezingama-24 emva kokufumana unyango lwe-chemotherapy. Kwakhona kusetyenziswe namanye amayeza okuthintela ukulibaziseka kwesohlwayo kunye nokuhlanza okungenzeka iintsuku eziliqela emva kokufumana imithi ye-chemotherapy. I-aprepitant powder nayo isetyenziselwa ukukhusela isicupunu kunye nokuhlanza okubangelwa utyando. I-aprepitant powder yiyo yeqela leziyobisi ezibizwa ngokuba yi-antiemetics. Oku kusebenza ngokuthintela isenzo se-neurokinin, into engokwemvelo engqondweni eyenza i-nausea kunye nokuhlanza.
Eli nyanga liza njenge-capsule kunye nejojo.
I-capsule ithathwa ngomlomo ngokuphindaphindiweyo kanye imihla ngemihla, kunye okanye ngaphandle kokutya. Ukuthintela isicupunu kunye nokuhlanza ngenxa ye-chemotherapy, mhlawumbi uya kuthatha i-Aprepitant i powder 1 ngeyure ngaphambi kokuqala kwe-dose ye-chemotherapy, kwaye ngoko ntsasa nganye kwiintsuku ezilandelayo ze-2. Ukuthintela isicupunu kunye nokuhlanza okubangelwa kukuhlinzwa, i-Aprepitant powder idlalwa njengowodwa umthamo kwiiyure ze-3 ngaphambi kokuqalisa ukuhlinzwa.
Injoza inikwa ngomhla we-1 kunye ne-capsule ethathwe kwiintsuku ze-2 kunye ne-3 okanye injoyilo yenziwa ngosuku lwe-1 kwaye akukho zikhefu zithathwa kule mihla elandelayo.
Iziphumo eziqhelekileyo zecandelo le-capsule ziquka ukunqandwa, ukubetha, kunye nokukhathala. Iziphumo eziqhelekileyo zomjovo zibandakanya i-hiccups, ukhathala, kunye nokutshintsha kwiimvavanyo zegazi zesibindi. Ungaqhubeki okanye usebenzise umatshini ogqithiseleyo uze wazi ukuba i-Aprepitant powder ikuchaphazela njani.
Powpitant Raw Powder
IV. Indlela yokuthenga i-Aprepitant powder esuka kwi-AASraw?
I-Fosaprepitant dimeglumine (EMEND) ipowder